ရွှေဂူ မိဘမဲ့ ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင် မူလတန်းကျောင်း
Memorial Pictures in Gukyaung Free Monastic Education Centre, 15 Sept 2013
Child painting on the wall (Myanmar map and National races)
Study hard in resting building as class room (Zayat in Myanmar)
Novices and I, I love them, I miss them, so whenever I visited to Nyaung Oo, I met them.
Child painting on the wall (Care on things)
Posted by Gukyaungbagan at 1:04 AM No comments:
Images of Gukyaung Free Monastic Education Center (Sept 15, 2013)
Novice named Aung Bwa complained to other novice, he isabit naughty on the group cause most of them are suffer without parents' loving kindness
Now they have regular practices in studying, so they gain more knowledge day by day. Regarding that point they study well in the new class room.
:\_Pay attention on their teacher
I mentioned about him in previous webpage. He only one escape from his family was attacked by Nagis Storm Disaster. When he arrived in Gukyaung, he suffers psychic on lost of his family, but now he study well, his handwriting is neat and tidy. He can do well on everything. His sadness feeling was cure by his study, many novice friends and new sasana environment.
Posted by Gukyaungbagan at 12:00 AM No comments:
အမှတ်တရမှတ်တမ်းလေးများ နှင့် အဆောက်အဦအလှူများ
Second time donation US$ 1000 from A.M Steenberg family (USA) for that dinning hall. ကိုရင်လေးများ စတင်ဘတ် မိသားစု လှူထားသော ထမင်းစားဆောင်တွင်တွေ့ရစဉ်
ကျမနှင့် ကျမချစ်သော ကိုရင်လေးများ ထမင်းစားဆောင်တွင်
မန္တလေး ရွေဆိုင်းကုန်သည်များလှူဒါန်းထားသော ကုဋီ
Posted by Gukyaungbagan at 4:10 AM No comments:
Labels: ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်များ, အလှူဒါနပြုကြသူငှာ
ဂူကျောင်း၏ လှုပ်ရှားမှု ခရီးစဉ်များ
ရန်ကုန်တိုင်း ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကြီင်္းပွားရေးရပ်ကွက် က ဦးသန်းထွန်း+ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း၊ ဦးကျော်ကျော်မိုါ် ညီအစ်ကို မောင်နှမတစ်စု ကောင်းမှု (ခြင်ထောင်အလုံး-၅၀၊ တန်ဘိုးငွေ- ၁၉၀၀၀၀ိ။ ဖြစ်ပါတယ်) သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေ။
ကျမ မြင်းခြံ ၊ ခုနှစ်၇ာခိုင်တောရကျောင်းမှာ မိမိအစီအစဉ်နဲ့ တရားသွားထိုင်ခဲ့တာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကစပြီး (၃)ရက်မြောက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ခင်း တနာရီကျော်ကျော်မှာ ညောင်ဦးကို ပြန်ရောက်ပြီး အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ရေအရင်းအမြစ်ဌာနကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အပြန်မှာတော့ ဂူကျောင်းကို ၀င်လိုက်တဲ့အခါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခြင်ထောင်တွေလာလှူတာနဲ့ ကြုံနေလို့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ရင်း သာဓုခေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျမချစ်သော ကိုရင်လေးများ မိုးလုံလေလုံမှာ စာသင်နိုင်အောင် ကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေတဲ့အလှူရှင်တွေ၊ မိမိသားများမဟုတ်သော်လည်း မိမိသားများ မက်ခြင်ကိုက်တာမကြိုက်နှစ်သက်သလို ကိုရင်လေးများကိုလည်း မက်ခြင်ယင် မကိုက်ပါစေနဲ့ လို့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ ခြင်ထောင်လှူဒါန်းပေတဲ့ ယခုအလှူရှင်နဲ့အတူ ယခင်အလှူရှင်များ၏ အလှူအတန်းကိုပါ သာဓု အနုမော် ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
အရှင်အာစာရ (ကိုးဘွဲ့ရ ဂူကျောင်းလာရောက်စဉ်က) သြ၀ါဒပေးနေပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် သင်ပေးသွားတဲ့ ခလေးခလေး အထင်မသေးနဲ့ တနေ့လူကြီးဖြစ်မှာ ...ဆိုတာလေးကို ကိုရင်လေးတွေက ကျမကိုရွတ်ပြပါတယ်။
ကိုရင်လေးများနှင့် ဂူကျောင်း၏ တစ်ဦးတည်းသောဆရာတော် အရှင်ခေမိန္ဒ
ကိုရင်လေးများ မန်းရွှေစက်တော်ခရီးတွင် ဆရာတော်နှင့်အတူ
ဆရာတော် ဦးခေမိန္ဒ၊ ဆရာမကြီး၊ ကျမ(အညို)နှင့် ကျမအား အစစအရာရာ ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် ၊ ဂုကျောင်းကိုရင်လေးများ၏ ဆရာမဟောင်းဖြစ်သော ညောင်ဦးမြို့နယ် စိုက်သုတေသန ခြံမန်နေဂျာ ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည် ဓာတ်ပုံဟောင်းများအား ကြည့်ရှုနေစဉ်
Posted by Gukyaungbagan at 12:35 AM No comments:
မတွေ့ရတာ နှစ်လကျော်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျမချစ်သော ကိုရင်လေးများ၊ ဒီလိုနဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်လာတာမို့ ကြိုးစားဘို့ အားပေးရပါတယ်ရှင်။ I departed from the novices more than2months, they will become great monks on one day, that is the reason I urge them to try hard in their education (Normal and Sasana- Buddhism doctrine)
ကိုရင်လေးတွေ ဘောဇနဆောင်မှာ ရေအခက်အခဲမရှိစေဘို့ ရွှေပိတောက်ရွှေဆိုင်းကုန်သည်များမှ လှူဒါန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ To convenience utilization of water at Dinning Hall (Bawzana Hall) the Shwe Patauk Gold sheets trader family donated tank on 15 Feb 2013
စာသင်ချိန်ပြီးဆုံးတဲ့ အတန်းငယ်က ကိုရင်လေးတွေ ယောကျာ်းဘာသား ကစားနေကြ ဗလပြနေကြစဉ်။ သိသိသာသာ ထွားလာကြပြီး အရပ်တွေရှည်လာကြပါတယ်။ခလေးသဘာဝအရ ပျော်ရွှင်နေကြတာကို ကြည့်ပြီး မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့စကားကို ကြားယောင်မိပါတယ်ရှင်။ အရွယ်က ထိန်းသိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့။
Over class low grade students (novices) are playing as strong as heros and they show their muscle. They are develop and taller than previous my visit to them. They are happily playing without any playing tools but in nature. I recall my memory of words that was speeches by Minn Gum sayadaw U Vicittathara "Ageing will control their behave"
Sadhu- Sadhu- Sadhu
Posted by Gukyaungbagan at 12:07 AM2comments:
Labels: လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်များ
ရွှေပိတောက်စာသင်ဆောင်နှင့် စာသင်နေကြသော ကိုရင်လေးများ
ရွှေပိတောက်စာသင်ဆောင် (Shwe Patauk Class room in Gukyaung-New Building)
မန္တလေးမြို့ ရွှေပိတောက် ရွှေကုန်သည် မိသားစုမှ လှူဒါန်းသော ကဗ္ဗည်း (The class room was donated by Shwe patauk Gold trader Family from Mandalay on 15 Feb 2013)
ကျကျနနစာသင်ကြားနေသော ကိုရင်လေးများ (The Novice are studying smartly in rain and wind protected building)
Posted by Gukyaungbagan at 11:50 PM No comments:
Please build An Auspious Home for Kid novices
Dear All, our novices have insufficient alm meals and shelter, you can built An Auspicious Home for yourself and them as above poem.
ကိုရင်လေးများဟာ မပြည့်စုံမလုံလောက်မှုကြားမှာ ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သင်တို့လည်း အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဓမ္မကဗျာလေးထဲကလို မိမိအတွက်တင်မက သူတို့လေးတွေအတွက် မင်္ဂလာရှိသောအိမ်ကလေး ဆောက်ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။
ပို့တင်သူ ကျမ(ကင်မရာကိုင်ထားသူ)နှင့် ကိုရင်လေးများကို မအေသဖွယ် တတ်နိုင်သမျှပြုစုပေးခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်မြင့်ကြည် (ညောင်ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံမန်နေဂျာ)
Posted by Gukyaungbagan at 10:19 AM No comments:
Memorial Pictures in Gukyaung Free Monastic Educat...
Images of Gukyaung Free Monastic Education Center ...
အလှူဒါနပြုကြသော ဟော်ဟန်မှမိသားစုနှင့် ဂူကျောင်းဘလော့အား အင်တာနက်သို့လွင့်ခြင်းအမှတ်တရ
EWOUT & Marjolein Streembergem (Holland), STEENBERGEN FAMILY မိသားစုမှ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၀၀)အား လှူဒါန်းသည်ကိ...
ကိုရင်လေးများ အိပ်ဖန်ဆောင် (တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ် နားကိုပိတ် အိပ်လိုက်စို့မနှေး)
အခန်းငယ်ငယ် ဒို့ (၇၀) ဘယ်လိုအိပ်ရပါ့ အသံမကြားအောင် စောင်ခေါင်းမီးခြုံ လုံအောင်အိပ်လိုက်မယ် မနိုးတော့ဘူး It is very small room, our 70...
ကိုရင်က အပါး(၇၀) အိပ်ဆောင်က ငယ်ငယ်
STEENBERGEN FAMILY နှင့် မူလတန်းဆောင်မှ ကိုရင်လေးများ အမှတ်တရ (၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂) Donar STEENBERGEN Family and Primary level students (no...
စာနာ မေတ္တာ ဂရုဏာဖြင့် ရှင်သန်တက်လှမ်း သာသနာလမ်းWith your Sympathy, lovingkindnee and companssionate, we are striving to step up on Sasana road
မေတ္တာ ဂရုဏာဖြင့် ကိုရင်လေးများအား လှူဒါန်းသမှု ပြုသွားသော ကိုးဘွဲ့ရ ဆရာတော် (အရှင်အာစာရ) အား ကြည်နူးဘွယ်ရာ ဖူးမြင်ရစဉ် With loving ki...
လှူဒါန်းနိုင်သောစာရင်း (Material list for donation)
စာသင်ဆောင်ဆောက်လုပ်ရန် လှူတန်းနိုင်ပါသည်။ ၁။ ၁၀ ပေသွပ် တချပ် ၄၅၀၀ ကျပ် ၂။ အုတ် တဖို ၄၀၀၀၀၀ ကျပ် ၃...
Dear All, our novices have insufficient alm meals and shelter, you can built An Auspicious Home for yourself and them as above poem. ...
Second time donation US$ 1000 from A.M Steenberg family (USA) for that dinning hall. ကိုရင်လေးများ စတင်ဘတ် မိသားစု လှူထားသော ထမင်းစားဆောင...
မတွေ့ရတာ နှစ်လကျော်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျမချစ်သော ကိုရင်လေးများ၊ ဒီလိုနဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်လာတာမို့ ကြိုးစားဘို့ အားပေးရပါတယ်ရှင်။ I depa...
Child painting on the wall (Myanmar map and National races) Study hard in resting building as class room (Zayat in Myanmar) ...
အနာဂတ်သာသနာကို စောင့်ရှောက်မည့် ကိုရင်လောင်းလျာလေးများ
ကော်ဖီနှင့်မုန့်အလှူ၊ သင်္ကန်းအလှူ၊ ဆေးအလှူများကို ကိုရင်လေးများ ချမ်းသာစွာသတင်းသုံးနိုင်ရန်အလိှုှု့ငှာ လှူဒါန်းခဲ့သော ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ငှက...
ကျမ ဓမ္မသာလာ ဘလော့တင်သူမှ ရွှေဂူ ပရဟိတ အခမဲ့ဘုန်းတေ်ာကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းမှ ကိုရင်ငယ်လေးများအား အနာဂတ်သာသနာတော်ကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းမည့် အလောင်းအလျာလေးများဟုခံယူထားသည့်အတွက် သာသနာတော်အကျိုးအလို့ဌာ မိမိတတ်သလောက်မှတ်သလောက် ဘလော့အားတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။